Android 10 Go ayaa si rasmi ah loo bilaabi doonaa deyrta | Androidsis
Android Go waa nooc ka mid ah nidaamka qalliinka ee taleefannada ku jira heerka hoose. Noocyo badan, sida Wiko, waxay adeegsadaan qaabkan qalliinka, kaasoo horey u lahaa laba nooc (oo ku saleysan Oreo iyo Pie). Ugu dambeyntii, Google hadda wuxuu xaqiijinayaa soo saarista Android 10 Go si rasmi ah deyrtaan. Nooc cusub oo la socda horumarin.
Waxaa la filaayay toddobaadyo in wax laga ogaado jiritaanka noocyadan waqtiguna waa yimid. Android 10 Go wuu jiraa, si rasmi ah ayaa loo bilaabi doonaa deyrta, shirkadduna waxay nooga tagaysaa laba war oo muhiim ah hawlgalkeeda, kuwaas oo xaqiiqdii si wanaagsan loo soo dhoweeyay.
Android 10 Go wuxuu noqon doonaa mid aad u dhaqso badan oo amaan ah, sida ay sheegtay shirkadda lafteeda. Waxay u oggolaan doontaa fulinta codsiyada ku jira nidaamka hawlgalka inay 10% ka dhakhso badan tahay noocii hore. Wax siin doona dadka isticmaala khibrad badan oo isticmaala dareeraha ah waqti kasta.
Intaas waxaa sii dheer, tirada taleefannada isticmaali kara waa la ballaariyay. Ilaa iyo hada waxay diirada saareen moodooyinka ilaa 1,5 GB oo RAM ah. Laakiin tan hadda waa la ballaadhinayaa, sidaas sidoo kale aalado leh 2 GB oo RAM ah helitaankeeda oo ka faa'iideyso faa'iidooyinkaas.
Isbedelka kale ee weyn ee ku jira Android 10 Go wuxuu khuseeyaa amniga. Waxaa la xaqiijiyay inay kujirto Adiantum asal ahaan. Sida inbadan oo idinka mid ah durba ogtahay, waa nidaam feylal gal feyl ah oo loogu talagalay aaladaha kujira heerka hoose, oo aan horey kaagala hadalnay horay.
Sidaa darteed, waa arrin kaliya dhowr toddobaad in Android 10 Go ay rasmi tahay hadda. Nooc cusub oo la cusbooneysiiyay oo ku saabsan nidaamkan hawlgalka ee taleefannada ku jira qaybta hoose ee dhammaadka ah ee Android. Malaha moodooyinka ayaa imaan doona bilowga sanadka 2020 isticmaal noocyadan asal ahaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Noocyada Android » Android 10 Go wuxuu bilaabayaa deyrtan dhowr horumar